Oromoo: Dhugaa kana jala murree walitti himna!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoo: Dhugaa kana jala murree walitti himna!!
Oromoo: Dhugaa kana jala murree walitti himna!!
Oromoo: Dhugaa kana jala murree walitti himna. Amma Oromoon Jaarmiyaa ykn Dhaaba takka ijaaru takka diiguu irraa hin jiru.
Dhaaba fi nama Kaayyoo qabsoo isaaf ta’u gingilchee lafa kaawwatera. Daandiin qabsoo wal adda ta’uus ABO, WBO fi KFO tu dhuma dubbiiti. dhaaba filuun ykn moggaasun waggaa sadi dura Gammoojjii Eritrea fi bosona Oromiyaatti hafe. Amma fedhan diiguun moggaasun,fedhan maqaa haaraa moggaasun hin danda’amu. Sababbiin isaa dhaabbilee kanneen dhaloonni qubee dhaalera. Oromoo biratti “Sirna” ta’aniru.
Kanaaf beektoonni, Activiistoonni keenya dandeessan Jaarmiyaa kanneen keessaa filadha miseensa ta’a. feetan akkuma kaleessaa kallattii fi Al-kallattiin tumsaa, akeeka, qeeqa dhiyeessa. Kanaan ala maqaa dhaaba tokko xureessa, ajajaa dhaaba sanaa of-fakkeessu fi adeemsan ala ajajuf yaalun diinummaa dha. Diinummaa Oromoo ti. Akkuma kaleessaa mala ittiin qabsoon Oromoo akka galma hin geenye,gufuu ta’uufi. Daboo diinaa deemu dha. Wanti sirnan beeku qabnu, dhaabbilee ykn jaarmiyalee Oromoo arrabsaa tuffachaa, diigaa,Oromoofan qabsa’a jechun kijiba. Ati Professor ta’i, Doktara ta’i,Activiistii ta’i,barsiisa ta’i, qonnan bulaa ta’i,Oromoo gadi malee Oromoo oli miti. ABO gadi malee ABO olis miti. Sababbiin isaa maddi Sabboontota Oromoo ABO dha.
Maddi barnoota Oromoo ABO dha. Maddi dhaabbilee kamuu ABO dha. Jaarmiyaa ABO’s yaa ta’u WBO tuffachaa Oromoofan qabsa’a jechun diinummaa Arraba lamati. Kanaaf namni keenya beekas ta’i wallaalaa, dhugaan bilisummaa Oromoo fi Oromiyaaf dhukkubsachaa Ookkolaa jirta taanan, Jaarmiyaa Oromoo amma jiran kan nama miti Waaqni beeku tumsi. Itti siqii waliin hojjedhu.beekumsa,dandeetti fi horii qabduun itti siqii hojjedhu. Ilaalcha dulloomaa keessaa ba’a. Jaarmiyaa amma Oromoon qabdu Waaqa gaditti hanga bilisummaatti namuu diiguu hin danda’u. Kanuma…
Adunyaan dhugaa oromoo argittee Hojjii inni hojjechuu qaba akka hojjecha hin jiree fi waan heduu…
Umanni Oromoo Sadarkka kana gubba gahe jiraa!!!
Injiifannoo WBO Kaaba shaggar!! Salaale Hidhabuu abootetti jajjabeewwan jaal Bobbaas lola marsaa lamaaf waraana…
Jibbiinsi Oromummaa kana caalu jiraa Yaa Oromoo ?
Jibbiinsi Oromummaa kana caalu jiraa Yaa Oromoo ? #adaabbaan hardha keessuummoota bakka birootii dhufaniin guuttamtee…
Naannoo Amaaraa keessatti hojjetoonni mootummaa leenjii waraanaa..
ODDUU OWITUU! Kalesaa WBOti Namani 300Itti Makame.